3 နှစ်ပေါင်း3ရက်သတ္တပတ်အကြာ -3နှစ်ပေါင်း3ရက်သတ္တပတ်အကြာ #411 by Colonelwing
ဒစ်ဂျစ်တယ်တိုက်ခိုက်ရေး Simulator ကမ္ဘာ့ဖလား (DCS ကမ္ဘာ့ဖလား) စစ်တပ်လေယာဉ်ပျံခြင်း simulation အာရုံစိုက်တစ်ဦးအခမဲ့-to-play စဒီဂျစ်တယ်စစ်မြေပြင်သည်။ ဒါဟာအခမဲ့ TF-51D နှင့်တစ်ဦး SU-25T တိုက်ခိုက်လေယာဉ်ပျံတို့ပါဝင်သည်။
DCS ကမ္ဘာ့ဖလား2DCS လိုအပ်ပါတယ်: နီဗားဒါးစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးပစ်ကွင်း (NTTR) မြေပြင်အနေအထား module ကို, အခမဲ့ကမ်ဘာပျေါတှငျကိုစစ်အေးကာလစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ရရှိနိုင်အကြီးဆုံးတဆက်တည်းလေထုနှင့်မြေပြင်အာကာသပါဝင်သော။ အဆိုပါ NTTR မြေဧရိယာ simulated လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်များ, လှောင်ပြောင်အမေရိကန်ဖက်ကနှင့်အတော်ကြာပစ်မှတ်ပ္ပံပါဝင်သည်။ အဆိုပါ NTTR လည်းနျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယနေ့ကအလံနီများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှနိုင်ငံများပါဝင်သည်အခြားစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ DCS ကမ္ဘာ့ဖလား2များအတွက် NTTR မြေပုံ Nelly လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို, Creech လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို, McCarran အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသတို့သားရေကန်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို (ခေါ်ဧရိယာ 51) တို့ပါဝင်သည်။ ဤမြေပုံလည်း Las Vegas မှာ, McCarran အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်နှင့်ဟူးဗားဆည်မြို့ပါဝင်သည်။
M-2000C multi-အခန်းကဏ္ဍ, ပြင်သစ်ဒီဇိုင်း, 4th မျိုးဆက်တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပေါ့ပါးတိုက်လေယာဉ်အဖြစ် 1970s အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ 600 က M-2000C လေယာဉ်ပိုလျှံ built-in ပါပြီ။ M-2000C မျှအလျားလိုက်အမြီးနှင့်အတူလိမ့်မည်တစ်ဦးအနိမ့်-set ကိုမြစ်ဝကျွန်းပေါ်တောင်ပံ single-engine ကိုတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ယင်း၏စိတ်အေးလက်အေးတည်ငြိမ်မှုပေးထားတိမ်းခြင်းနှင့်ပျံသန်း-by-wire ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုထိန်းချုပ်သည့်စနစ်ရှိပါတယ်။ M-2000C လည်းအမြင်အာရုံပ္ပံကျော်လွန်ပြီးမှာနိုင်စွမ်းခြေရာခံခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပစ်မှတ်ကြောင်း multi-mode ကို RDI ရေဒါများပါဝင်သည်။ အမြောက်များနှင့်ဒုံးကျည်နှင့်အတူအခြားအလေယာဉ်တစ်စင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အပြင်, M-2000C လည်းအမြောက်များ, ဒုံးကျည်နှင့်ဗုံးများနှင့်အတူမြေပြင်ပစ်မှတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ M-2000C DCS ကမ္ဘာ့ဖလား၏စစ်မြေပြင်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်ပါ!
F-5E ကျား II ကို
F-5E အစောပိုင်း 1970s အတွက် Northrop ကော်ပိုရေးရှင်းကတီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအလင်းနည်းဗျူဟာတိုက်လေယာဉ်ယခင်က F-5A ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးအဆင့်မြှင့်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ F-5s '' တိုက်ခိုက်ရေးအခန်းကဏ္ဍလေကြောင်းစိုးမိုးရေး, မြေပြင်ထောက်ခံမှုများနှင့်မြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုလွှမ်းခြုံ။ ယင်း၏မစ်ရှင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, စစ်ဆင်ရေး၏လွယ်ကူခြင်းနှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ပေးထား, ကျား II ကိုရှိပါတယ်, နှင့်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့, လေတပ်ဖွဲ့များအစေခံနေဆဲဖြစ်သည်။
F-5Е 20 နှစ်ခု 39-မီလီမီတာМ3-А280အမြောက်များနှင့်အတူလက်နက်ကိုင်တစ်ဦးချင်းစီအမြောက်များနှုန်းစာရငျး။ အဆိုပါအမြောက်များနှာခေါင်းအပိုင်း, လေယာဉ်မှူးအခန်း၏ရှေ့ဆက်တွင်တည်ရှိပါသည်။ အထူး deflectors M-39-A3 operating တစ် bi-product အဖြစ်ပူဓာတ်ငွေ့စားသုံးမိပါကစေသောတွန်းတင်းကုပ်အခြေအနေများမှရှောင်ရှားရန်အသုံးပြုကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမြောက်များတစ်မိနစ်ကိုကျည် 1500 မှ 1700 တစ်မှုနှုန်းမှာပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
တစ်ခုချင်းစီစုစုပေါင်း AIM-9 အနီအောက်ရောင်ခြည်-ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းတဲ့ launcher ရထားလမ်းထည့်သွင်း။
ငါးခက်ရမှတ် (တဦးတည်း centerline pylon လေးယူခဲ့ pylons) လေယာဉ်စုစုပေါင်းဝေဟင်မှမြေပြင်လက်နက်များ (6,400 ကီလိုဂရမ်နှင့် ပတ်သက်. ) (ဗုံးများ, စပျစ်သီးပြွတ်ခဲယမ်းနှင့်ဒုံးကျည်) 3000 ပေါင်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, illumination ခဲယမ်းမီးကျောက်များနှင့်ကုန်တင်ကွန်တိန်နာပူးတွဲနိုင်ပါသည်။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကြာချိန်နှင့်အကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်ရန်, ပြင်ပလောင်စာဆီကန်များသုံးခက်အချက်များ (က centerline pylon နှစ်ယောက် inboard pylons) မှပူးတွဲပါနိုင်ပါတယ်။ တိမ်းနှင့်မြန်နှုန်းအားလုံးပြင်ပစတိုးဆိုင် jettisoning အားဖြင့်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် A မြင့်ဆုံးနိုင်ပါတယ်။
F-15 လင်းယုန် | ကန့်သတ်မှာပါ
F-15 မကြာခဏအစောပိုင်း 1970st ရာစုအထိ 21s ထံမှအကြီးမြတ်ဆုံးအမေရိကန်တိုက်လေယာဉ်အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည်။ F-15C ထူးချွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့စင်ကြယ်သောတိုက်လေယာဉ်သည်နှင့်မဆိုကိုအတည်ပြုဆုံးရှုံးမှုခံစားနေရပြီးမပါဘဲ 100 ဝေဟင်မှဝေဟင်အောင်ပွဲကျော်သွင်းယူပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ DCS Flaming ကမ်းပါးက F-15C တဲ့ professional အဆင့်ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်မော်ဒယ်လွတ်လပ်မှုကိုနိုင်စွမ်းယာဉ်များ၏အသေးစိတ်6ဒီဂရီအလွန်တိကျမှန်ကန်ပြင်ပမော်ဒယ်နှင့်အသံတို့ပါဝင်သည်။
တစ်ဦး DCS Flaming ကမ်းပါးခေါင်းစဉ်အဖြစ် F-15C သိသိသာသာသင်ယူမှုကွေးလျှော့ချ, ရှုပ်ထွေးယာဉ်အပြန်အလှန်မပါဘဲအသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် F-15C ကီးဘုတ်နဲ့ Joystick ယာဉ်ယာဉ်စနစ်များအရေးပါဆုံးသောမစ်ရှင်အပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူပညတ်တော်မူ၏ပါရှိပါတယ်။
A-10C: 16-2 အလံနီ
DCS: A-10C Warthog အမေရိကန်ဝန်ကြီးချုပ်ပိတ် Air ကိုပံ့ပိုးတိုက်ခိုက်လေယာဉ်တစ်စင်း၏တစ်ဦးကို PC ခြင်း simulation ဖြစ်ပါတယ်။ Black ကငါးမန်းများနှင့်ပင်မြင့် DCS စီးရီးအတွက်ဘားပေါ်ပေါက်: ဒီ DCS အောက်ပါခြင်း, DCS စီးရီးအတွက်ဒုတိယလေယာဉ်ပျံသည်။ Warthog ပျံသန်းဒိုင်းနမစ်, ကိရိယာများအား, အာရုံခံကိရိယာများနှင့်လက်နက်စနစ်များပတ်သတ်ပြီးအတွက်ခေတ်မီ fixed တောင်ပံတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်အများဆုံးလက်တွေ့ကို PC ခြင်း simulation တတ်၏။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:3နှစ်ပေါင်း3လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်များက Colonelwing.